Casiirku Miyuu Mudan Yahay Isku-Tuujinta? | Martech Zone
Khamiis, Juun 30, 2009 Axad, Agoosto 23, 2009 Chris Lucas
Haddii aadan ka maqlin Horizon Realty kaliya raadinta degdegga ah ee Google waxaadna ka heli doontaa dhowr maqaal oo xiiso leh, sida qoraalkan oo kale Mashable. Deg deg deg ah, kireyste hore oo iyaga ka mid ah, Amanda Bonnen, ayaa soo dirtay fariin ku saabsan ku nool caaryo mid ka mid ah cutubyadooda. Horizon ayaa xereeyay a dacwad $ 50,000 ka dhanka ah Ms Bonnen. Hadda xaqiiqooyin badan ayaa soo if baxaya, laakiin waxaa jira cashar ka weyn oo laga baran karo halkan oo kaliya maahan in Baraha Bulshadu ku soo noqon karaan inay ku qaniiyaan.
Casharka 1aad: Ogow cidda awoodda leh
Markaad dhex gasho dhul aan la hubin, ha ahaato baraha bulshada, dadka wax qora, ama xitaa warbaahinta caadiga ah, waxaa muhiim ah in la fahmo cidda saxda ah ee awoodda leh. Maanta isbeddelka awoodda ayaa si cad u muuqda laakiin qof walbaa ma helayo. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay ka hor inta aanad dagaal ku dhex qaadin dadweynaha dhexdiisa, inaad u maleyneyso inaad sax tahay iyo in kale, inaad fahanto sida ay dhacdooyinka u dhici karaan iyo sida laga yaabo inay u ciyaaraan. Waxay u badan tahay, in kasta oo aad u maleynaysid, inaadan haysan kaararka oo dhan.
Casharka 2-aad: mindi ha u keenin is rasaaseyn
Hubso in haddii aad soo saarayso mowduuc ku lug leh baraha bulshada, aad fahamtay baraha bulshada. Hubso inaad udiyaar garowday inaad u adeegsato qalabka wax laga sheegayo faa iidadaada. Haddii kale markii aad mididaas jiido oo qofka kaa soo horjeedaa, run ama aanad, qoriga furin waxaad noqonaysaa shinbir fadhi.
Sida boostada Mashable ay si sax ah u dhigeyso:
Waxaan aad u hubnaa in Horizon Realty ay wax badan oo ka badan $ 50,000 ka lumisay dib-u-celinta Twitter. Taasi waa waxa aad heshid markaad ku dhawaaqdo xigashooyinka? Annagu horta dacwad baannu nahay, su'aalo ayaan ka weydiin doonaa goor dambe nooca urur.?
Casharka 3aad: Hel talobixin habboon
Kama hadlayo lataliyaha sharciga. Waxaa aad uga muhiimsan maalintan in aad haysato qof aad u jeesan karto si aad u weydiiso, "maxaan ogaanayaa". Ururada waawayn waxaa muhiim ah inaad miiska ku haysato suuqgeyntaada iyo kooxda PR. Ururada yaryar waxay u noqon kartaa a la taliyaha arrimaha bulshada, lammaane, ama xitaa uun jimicsigaaga xagaaga. Cidwalba oo ay tahay, iska hubi inaad faham dhab ah kahesho waxa dhici kara, sida aad uga jawaabi lahayd, iyo maxay yihiin natiijooyinka suurtogalka ah.
Isgaarsiinta ayaa isbedelaysa. Maxay ahayd sheeko yar oo maxalli ah dhawr sano ka hor waxay noqon kartaa calaf qaran maanta. Hubso inaad leedahay faham buuxa oo ku saabsan sida ay waddadu u egtahay ka hor intaadan ku lug yeelan dagaalka xiriirka dadweynaha.
Jul 30, 2009 markay tahay 1:28 PM
Tusaalihii ugu dambeeyay ee isbeddelkan waa United Airlines oo afuufaysa muusikiiste Dave Carroll ka dib markii uu jabiyay guitarkiisii ​​qaaliga ahaa ee Taylor. Fiidiyowiisa, "United Breaks Guitars" ayaa isla markiiba faafay oo - halka $ 180M hoos u dhaca qiimaha United laga yaabo in laga badbadiyo - United qiimo bey ku yeelatay qaar ka mid ah sumcadaha qaar.